मन्त्री पोखरेलको भारत लक्षित चेतावनी : नेपालीहरु अपमान सहँदैनन् ! – Sudarshan Khabar
मन्त्री पोखरेलको भारत लक्षित चेतावनी : नेपालीहरु अपमान सहँदैनन् !
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सिमानाबारे भारत सरकारको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै चेतावनी दिएका छन् ।
भारतीय पक्षबाट नेपालको नक्साबारे टिप्पणी भएकै बेला उनले ट्वीटर मार्फत नेपालीहरु कसैमाथि पनि अपमान भएको र होच्याएको सहन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् : ‘हामी कसैमाथि असमानरअपमानजनक व्यवहार गर्दैनौं, कसैले हामीमाथि त्यस्तो गर्न खोजे कदापि सहन्नौं ! नेपालको स्वतन्त्र, विवेकपूर्ण र स्वाभिमानी व्यवहारलाई कसैले होच्याउनरअपमानगर्न खोजे नेपालीहरूले कदापि सहँदैनन् । नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने यही भावनाद्वारा सँधै निर्देशित बनिरहौं !’